नेपालमा यस्तो शक्तिशाली मन्दिर छ जहाँ पुग्दा गाडी रोकिन्छन , दर्शन गरी स्टार्ट गर्नुपर्छ जय सुपा देउराली सबैको रक्षा गर ! – Online Khabar 24
नेपालमा यस्तो शक्तिशाली मन्दिर छ जहाँ पुग्दा गाडी रोकिन्छन , दर्शन गरी स्टार्ट गर्नुपर्छ जय सुपा देउराली सबैको रक्षा गर !
अर्घाखाँची जिल्लामा पर्ने पश्चिम नेपालको प्रख्यात सुपादेउराली मन्दिर अगाडि पुगेपछि गाडीको गति रोकिन्छ र इन्जिन बन्द हुन्छ अर्घाखाँचीको नरपानीमा पर्ने सुपादेउराली मन्दिर अगाडी पुगेपछि सबै गाडीले रोकेर मन्दिरको दर्शन गर्छन् ।
चालकलाई हतार नै रहेछ भनेपनि चालकले गाडीको चाबी निकालेर स्टार्ट बन्द गर्छन् अनि गाडीबाटै दर्शन गरेर मात्र आफ्नो गन्तव्यमा लाग्छन् ।
किंवदन्ति अनुसार लाहुर जान हिडेको एक जना बाटो हिँड्ने युवकले ‘देवी, म सेनामा भर्ती हुन पाऊँ, छुट्टीमा पहिलोपटक फर्की आउँदा एकतोला सुन चढाउनेछु,’ भनी भाकल गरेको थियो । देवीको भाकल अनुसार ऊ भर्ती पनि भयो ।
केही समयपछि लाहुरे छुट्टीमा फर्कियो । लाहुरेले भाकल बिर्षेछ । देवीको मन्दिर छलेर जान लाग्दा देवीको शक्तिका कारण लाहुरे आफैँ भित्तामा टाँसिएको किंवदन्ति छ ।
सुपादेउराली मन्दिर नजिकको पहरामा पछि लाहुरेको आकृति र उसले बोकेको गुण्टाझैँ आकृति देख्न सकिन्छ । सो स्थानमा अहिले पनि ‘लाहुरे टाँसिएको भिर’ भनेर मन्दिर संरक्षण समितिले होर्डिङ बोर्ड नै राखेको छ ।
अहिले पनि सो बाटो भएर हिँड्ने अधिकाशं गाडीले मन्दिरको दर्शन गरेर मात्र अघि बढ्ने गर्छन् । गोरुसिङ्गे–सन्धिखर्क चल्ने कुनै पनि सवारीका गाडीहरू यो मन्दिरमा भेटी नचढाइकन अगाडि बढ्दैनन् । यस्तै यो पनि भनिन्छ, स्वस्थ मानिस सबैले सपना देख्छ । मानिसले एक रातमा कम्तिमा पनि ६ देखि ७ ओटा सम्म सपना देख्छ ।
–सपनामा स्वर्गवास व्यक्ति कपडा नलाएको, जुत्ता चप्पल नलगाएको अर्थात् भोकै भएको अवस्थामा देखियो भने उसलाई यी कुराहरुको अभाव भएको बुझ्नुपर्छ । यस्तो सपना देखिएमा नजिकैको मन्दिरमा गएर यी वस्तुहरु स्वर्गवास व्यक्तिको नाममा दान गर्नु राम्रो हुन्छ । -यदि स्वर्गवास व्यक्ति सपनामा कतै टाढा आकाशमा देखियो भने उसले मुक्ति पाएको संकेत हुन्छ । यो खबर साभार गरियको हो ।
Prevअन्ततः राजेश हमालसंग झुकेरै सलोन बस्नेतले मागे माफी ! कारण निकै रोचक
nextजन्माउँदा मेरो कोख दुखेन आज भतभती शरीर पोलिरहेछ’, छोरी म प्राण दिन्छु, फर्केर आऊ ।”